EU kwenyere ka iwepu ngagharị na Europe ka nke June 15, 2017 | Gam akporosis
EU kwenyere ịkwụsị iwegharị na Europe site na June 15, 2017
El njedebe nke ịgagharị na Europe na-abịaru nso. Kpọmkwem na na-esote June 15 Ọrụ a na-akpasu iwe ga-akwụsị, anyị ga-enwekwa mkpuchi na mpaghara ochie niile na-enweghị nsogbu gbasara ụgwọ ahụ.
Na, ọ bụ ezie na ha na-anwa ọtụtụ afọ ịchọta ihe ngwọta iji kwụsị ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ na ọnụego mpaghara anyị mgbe anyị na-agafe nke ọ bụla Mba 28 ndị bụ akụkụ nke European Union, o yiri ka e nwere nkwekọrịta n’ikpeazụ.
Rogagharị ga-apụ n'anya na June 15, ọbụlagodi na Europe
Ndị ọrụ ekwentị na-agbasi mbọ ike iji gbochie nkwekọrịta Na agbanyeghị na ọgụgụ isi emesiri emeri, otu ndị ọrụ ahụ ga-ahụ maka ịtọbe oke maka iji oku na data, yabụ anyị kwesịrị ị atta ntị na mmepe na nke a.
Ma n'aka nke ọzọ enwere okwu banyere ụgwọ ahịa ahịa. Kedu ka esi emefu mmefu nke ojiji nke netwọkụ nke onye ọrụ ọ bụla? O yiri ka emesịrị ụlọ ọrụ ekwentị ga-ana ibe ha ego maka oriri ndị ahịa ha.
N'ụzọ dị otú a, a na-etinye gig ọ bụla na ọnụahịa nke euro 7.7 dị ka nke June 15, ọ bụ ezie na ọ ga-ebelata ruo mgbe ọ ruru 2.5 euro kwa gig na 2022. Ihe yiri ya na-eme na oku, nke ga-efu 5 cents na 3.2 cents n'otu oge .
Ezie na ọ bụ eziokwu na Enweghị onye na-eme ihe ọ bụla gbanwere ọnụego ịgagharị ruo na June 15, 2017 ụkpụrụ ọhụrụ ahụ na-abanye n'ike, enwere ndị na-arụ ọrụ ugbua na-ekwe ka akpọọ oku na Europe na England ma na-ejigide njirimara nke ọnụego ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike rụọ ọrụ jazztel na-agagharị.
Ihe omuma atu doro anya nke a bu Vodafone. Abụ m onye ahịa nke ha ma ekwesịrị m ikweta na, dịka enwere ihe ndị na-adịghị m mma, eziokwu nke inwe ike ịga ọ bụla mba omume na udo nke uche nke inwe ezigbo njikọ andntanetị na oku bụ isi ihe mere m ji nwee akara na onye ọrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » EU kwenyere ịkwụsị iwegharị na Europe site na June 15, 2017
Leaked oyiyi na nkọwa nke Xiaomi Redmi Pro 2
My gam akporo anaghị ekwe ka m tinye akaụntụ Google m, ọ na-anọ na "Lelee ozi"